अपमान, मानहानि र निन्दा | Law & More B.V.
ब्लग » अपमान, मानहानि र निन्दा
अपमान, मानहानि र निन्दा
आफ्नो राय वा आलोचना व्यक्त सिद्धान्त मा एक वर्जित होइन। जे होस्, यसको यसको सीमा छ। वक्तव्यहरू गैरकानुनी हुनु हुँदैन। एक बयान गैरकानुनी छ कि छैन प्रति विशिष्ट स्थितिको न्याय गरीनेछ। न्यायमा एकतर्फी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार र अर्कोतर्फ आफ्नो सम्मान र प्रतिष्ठाको संरक्षणको अधिकार बीच सन्तुलन कायम गरिएको छ। अपमानजनक व्यक्ति वा उद्यमीहरूको सँधै नकारात्मक अर्थ हुन्छ। केहि अवस्थाहरूमा, अपमान गैरकानूनी मानिन्छ। अभ्यासमा, प्रायः दुई प्रकारका अपमानको बारेमा कुरा गरिन्छ। त्यहाँ मानहानि र / वा निन्दा हुन सक्छ। दुखी र अपमान दुबै जनाले जानाजानी पीडितलाई नराम्रो प्रकाशमा राख्छ। निन्दा र मानहानिको ठ्याक्कै के अर्थ हुन्छ यो ब्लगमा वर्णन गरिएको छ। हामी निषेध पनि हेर्नेछौं जो एक व्यक्ति विरुद्ध लगाउन सकिन्छ जो मानहानि वा / वा निन्दाको दोषी छ।
"मानहानि वा निन्दाले ढाकिएको कुनै पनि जानबूझकर अपमान" साधारण अपमानको रूपमा योग्य हुनेछ। अपमानको एक विशेषता यो हो कि यो गुनासो अपराध हो। यसको मतलब पीडितले रिपोर्ट गरेको खण्डमा मात्र आरोपीलाई मुद्दा चलाउन सकिन्छ। अपमान सामान्यतया केवल सफा नहुने कुराको रूपमा मात्र देखिन्छ, तर यदि तपाईं आफ्नो अधिकारको बारेमा राम्ररी सचेत हुनुहुन्छ भने, केहि केसहरूमा तपाईं यो कुरा निश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि जसले तपाईंलाई अपमान गरेको छ उसमाथि मुद्दा चलाउन सकिन्छ। जे होस्, अक्सर यो हुन्छ कि पीडितले अपमानको बारेमा रिपोर्ट गर्दैनन् किनभने उसले केसको प्रचारको सम्बन्धमा बढी बेफाइदा भोग्न सक्छ।
जब यो जानाजानी कसैको सम्मान वा राम्रो नाममा प्रचार गर्ने उद्देश्यको साथ आक्रमण गर्ने कुरा हो, तब त्यो व्यक्ति मानहानिको दोषी छ। जानाजानी हमला गर्नु भनेको कसैको नाम जानाजानी खराब उज्यालोमा राख्नु हो। जानबूझकर आक्रमण गरेर, विधायिकाको अर्थ यो छ कि यदि तपाइँ जानाजानी कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनको बारेमा खराब कुरा बोल्नुहुन्छ भने यसलाई प्रचार गर्ने उद्देश्यले। मानहानि मौखिक रूपमा लिखित रूपमा लिन सक्छ। जब यो लिखित रूपमा लिन्छ, यो एक मानहानि नोटको रूपमा योग्य छ। मानहानिको लागि मनसाय प्रायः बदला वा निराशा हुन्छ। पीडितको लागि एक लाभ यो हो कि मानहानि गरिएको प्रतिबद्ध गर्न सजिलो छ यदि यो लिखित छ भने।
निन्दाको बारेमा कुरा गरिन्छ जब कसैलाई जानाजानी सार्वजनिक बयान दिएर बदनाम गरिन्छ, जसको बारे उसले थाहा छ वा जान्नुपर्दछ कि बयानहरू सत्यमा आधारित छैनन्। निन्दालाई झूटको माध्यमले कसैलाई आरोप लगाएको रूपमा देख्न सकिन्छ।
आरोप तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ
एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न जुन व्यवहारमा हेरिरहेको छ कि त्यो हो, र यदि त्यस्तो हदसम्म भएमा, आरोपहरूले तथ्यहरूको समर्थन गरे जुन वक्तव्यहरूको समयमा उपलब्ध थियो। त्यसकारण न्यायाधीशले परिस्थितिलाई पछाडि फर्केर हेर्दछन् जस्तो कि त्यस समयमा प्रश्नहरुमा बयान गरिएको थियो। यदि केहि कथन न्यायाधीशलाई गैरकानुनी देखिन्छ भने उसले नियम दिनेछ कि बयान दिने व्यक्तिले भएको क्षतिको लागि जिम्मेवार हुन्छ। धेरै जसो केसहरूमा पीडित क्षतिपूर्तिको हकदार छ। गैरकानुनी कथन भएमा पीडितले वकिलको सहयोगमा सुधारको लागि अनुरोध गर्न सक्छ। सुधारको अर्थ अनधिकृत प्रकाशन वा कथन सुधार गरिएको हो। संक्षेप मा, एक सुधार बताउँछ कि अघिल्लो सन्देश गलत थियो वा निराधार थियो।
नागरिक र आपराधिक प्रक्रियाहरू
अपमान, मानहानि वा अपमानको मामलामा, पीडित दुवै नागरिक र आपराधिक कार्यवाही को माध्यम बाट जाने संभावना छ। नागरिक कानून मार्फत, पीडितले क्षतिपूर्ति वा सुधारको लागि दावी गर्न सक्दछ। किनभने मानहानि र निन्दा पनि आपराधिक अपराध हो, पीडितले उनीहरूलाई रिपोर्ट गर्न र अपराधीलाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत कारबाहीको माग गर्न सक्दछ।
अपमान, मानहानि र अपमान: प्रतिबन्धहरू के हुन्?
साधारण अपमान दण्डनीय हुन सक्छ। यसको लागि सर्त यो छ कि पीडितले एक रिपोर्ट बनाएको हुनुपर्छ र सार्वजनिक अभियोजन सेवाले संदिग्धलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्दछ। न्यायाधीशले लगाउन सक्ने अधिकतम सजाय तीन महिना कैद वा दोस्रो श्रेणीको जरिवाना (, 4,100) छ। जरिवाना वा (जेल) सजायको रकम अपमानको गम्भीरतामा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, भेदभावपूर्ण अपमानहरु को अधिक कडा सजाय छ।
मानहानि पनि दण्डनीय छ। यहाँ फेरी पीडितले प्रतिवेदन बनाएको हुनुपर्छ र सार्वजनिक अभियोजन सेवाले आरोपीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्दछ। मानहानि को मामला मा न्यायाधीश को छ महिना को अधिकतम नजरबन्द वा तेस्रो श्रेणी (€ 8,200) को जरिवाना लगाउन सक्छ। अपमानको मामला मा जस्तै, अपराधी को गम्भीरता यहाँ पनि ध्यानमा राखिएको छ। उदाहरण को लागी, एक सरकारी कर्मचारी को विरुद्ध मानहानि बढी कडा सजाय छ।
निन्दाको मामलामा, लगाउन सकिने दण्डहरू धेरै भारी हुन्छन्। निन्दाको मामलामा अदालतले अधिकतम दुई वर्ष कैद वा चौथो कोटी (, २०,20,500००) जरिवाना लगाउन सक्छ। निन्दाको मामलामा, त्यहाँ गलत रिपोर्ट पनि हुन सक्छ, जबकि उद्घोषकलाई थाहा छ कि कसुर गरिएको छैन। अभ्यासमा, यसलाई एक मानहानिक अभियोगको रूपमा बुझिन्छ। त्यस्ता शुल्कहरू मुख्यतया त्यस्तो परिस्थितिहरूमा देखा पर्दछ जहाँ कसैले कसैलाई कुटपिट वा दुर्व्यवहार गरिएको भनी दाबी गर्छन्, जबकि यो केस हैन।
मानहानि र / वा निन्दा गर्न कोशिस गरियो
मानहानि र / वा निन्दा गर्न को लागी एक प्रयास दण्डनीय छ। 'प्रयास' भनेको भनेको अर्को व्यक्तिको विरूद्ध मानहानि वा बदनाम गर्ने प्रयास गरिएको हो, तर यो असफल भएको छ। यसको लागि आवश्यकता यो हो कि त्यहाँ अपराध सुरु हुनुपर्दछ। यदि त्यस्तो सुरू अहिलेसम्म गरिएको छैन भने, त्यहाँ कुनै सजाय छैन। यो पनि लागू हुन्छ जब एक सुरु गरीएको छ, तर अपराधीले आफ्नो निर्णय अनुसार निन्दा वा बदनाम नगर्ने निर्णय गर्दछ।
यदि कसैलाई मानहानि वा अपमानको प्रयासको लागि सजाय योग्य छ भने, पूर्ण अपराधको अधिकतम जरिवानाको 2/3 अधिकतम जरिवाना लागू हुन्छ। मानहानि प्रयास को मामला मा, यो4महिना को अधिकतम सजाय छ। अपशब्दको प्रयासको मामलामा यसको अर्थ एक बर्ष र चार महिनाको अधिकतम दण्ड।
के तपाइँ अपमान, मानहानि वा निन्दाको सामना गर्नुपर्दछ? र तपाइँ तपाइँको अधिकार को बारे मा अधिक जानकारी चाहानुहुन्छ? त्यसो भए सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् Law & More वकिल हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं यदि तपाईंलाई सार्वजनिक अभियोजन सेवा आफैंले मुद्दा चलाइरहेको छ भने। हाम्रो विज्ञ र आपराधिक कानूनको क्षेत्र मा विशेषज्ञ वकिलहरु तपाईंलाई सल्लाह प्रदान गर्न र कानूनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न खुसी हुनेछन्.
अघिल्लो पोस्ट भाँडा सम्पत्ति को खण्डन
अर्को पोस्ट विवेकी बर्खास्तगी